Maxay Ciidamadii Militariga ee Soomaaliya uga dhignaayeen Afrika iyo Caalamka (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 12, 2018 7:01 b 1
Maanta ayaa waxaa ay ku beegantahay maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 12-ka April oo ku beegan 58-sano kadib markii la’aasaasay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd 1960kii.
Magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa lagu qabanayaa munaasbado lagu xusayo maalinta Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Hadaba Ciidamadii Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa ahaayeen ciidamo awood badan ku lahaa Afrika iyo Caalamka intiisa kalle, waxaana ay ka qaybqaateen xoriyadda ay maanta ay haystaan dalal badan oo Afrikaan ah, sidoo kalena horay waxaa ay door wayn ku lahaayeen dhismihii ciidamada ee Dowladda Imaaraatka Carabta.
Taariikhda ay lahaayeen waraysi kusaabsan waxaanu ka waraysanay Janeraal Yaasiin Cumar Dheere.
Been bay u sheegi jireen ummada `caalamka Qabwayni aan Meelna jirin DICTATORSHIP baa haystay mudo twenty years wuxuu doonana ka samaystay Marka beenta yaa Niyada laysugu dhisin soomaalia waxay ahayd Ma jirin waxaad arkaysaa ruux ku leh high school baan dhameeyey warqadna markaad u keento wixii ku Qoran garanmaayo saa buu ku bah dilan yahay marka ruuxaa yaa bah dilay MA iswaydiiseen jawaabtu WAA MAYA